Ukuxhamla - Ukunceda Ubuntu obunomdla obuphezulu
Hlola uluhlu lweNcedisi yoMntu oPhezulu
Ukuba i-hypersensitive inokuchazwa nje ngokuba yinto ephilileyo ebomini. Umntu onomdla kakhulu (HSP) usuku olubonakala luqhelekileyo lunokuba lunzima. Ngona zizinto ezintle kakhulu zokuvuselela umntu odibana nayo imihla ngemihla zingenakho ukuvuselela. Iziphumo ze-hypersensitive ziyahlukahluka ngamnye kumntu ngamnye.
Ukusebenza ngokuthintela, ukuKhanya, isandi kunye noSuka
Amandla anxulumene nomnxeba, isandi, isiphunga, ukukhanya, njl.
zidla ngokukhawuleza okanye zixakeke kakhulu kwi-HSP. Ngenxa yoko, i-HSP inokudideka ngokwengqondo, ikhutshwe ngokomzwelo, kwaye / okanye ingakhathazeki. Uhlobo lwe-Hypersensitivity linxulumene nomqondo ophakamileyo wokwazisa kunye neengqondo. Oku kwenza ukuba ube yi-HSP okanye uphume ngendlela yesibini.
Ukuba ngumntu oPhezulu
Iimbuzo: Ucinga njani na?
Gwema u kuphepha!
Ubomi abufanelekanga, ukuhlaziywa okanye ukuzigcina ngokukhuselekileyo akusiyo impendulo. Nangona ukuphepha kungabonakala ngathi impendulo engcono kakhulu, kuyona nto iyona nto isenzo esona sibi kakhulu. Ukukhetha ukuphepha ukuhlangabezana nesisombululo esiyingozi akusiyo impendulo.
Iphuzu lokuphila kwiplanethi kukuguqula umphefumlo / ubuntu bakho. Ukukhula ngokomoya kuya kuba nzima ukwenza ngaphandle kokubandakanyeka kunye nokuqhagamshelana nabanye abantu. Oku kuthetha ukuba nabani na abaneengxaki ezinzulu kufuneka bafunde indlela yokuphila ngaphandle kwehlabathi phakathi kwamandla (okanye amanzi amanzi) anengxaki kubo.
Uncedo kuMntu oPhezulu oPheleleyo
Ubomi bunokukwazi ukulawulwa kwi-HSP. Kukho iindlela ezininzi ze-HSP ezikhusela kuzo ezinobungozi ezinobungozi ezingaphazamisa ubomi obunokubanika.
Iingcebiso Zokuhamba Ngomphefumlo Ovakalelwa
IziLungiso zeeNkcenkceshela ze-Ultra-Sensitive
Ukunqoba i-Empathic Tendencies
Iqela leNkxaso ye-Empaths
Nantoni na eyenziwa ngumzimba okanye ingqondo ingabangela ukuphazamiseka kunoma ubani. Kodwa, kwi-HSP, umngcipheko uphezulu kakhulu. Into edlayo, ephefumlayo, efunyenwe ngesikhumba, okanye ifunyenwe yi-aura okanye ihlala ihlala kwintsimi yamandla ingabangela umphumo obi. I-HSP iza kufunda ngokukhawuleza ukuphi ukutya, izicumba kunye nabantu abangela iimpawu zokungabikho.
Ishiyeli kunye noKhuseleko
Ukuzikhusela nokukhusela izixhobo ezikunceda ukuhlala phakathi kwezinto eziphazamisayo.
Ubumnyama obumnyama bokuCamngca kokuKhanya - UkuShicilela ukuViliswa kwe-Empaths
I-imeyile eyingozi - Ukufunda phakathi kweeLines
UkuPhepha okanye Ukunciphisa Ukuboniswa kweMibonakalo yeMidiya yeziganeko ezimbi
Ziqaphele ngamagqabi anamandla
Ukuhlonipha Ukutya kunye Neentlobo
Ngenhlanhla, wonke umntu unokulawula okokutya okudliwayo. Ukuchonga ukutya okunzima kunye nokuphelisa ukutya ekudleni kwakho kungenziwa ngokuguqulwa kokutya. Ngakolunye uhlangothi, awanakuphepheka lula. Iimpumba kunye nezihlambuluki ezicocekileyo ziyaziwa zivuthayo, kodwa zikhona iimveliso ezininzi ezinokhemikhali esicacise kuyo imihla ngemihla ezinokuba yingozi kumntu oxilisayo.
Iintloko kunye neZondlo zokutya
Ukunyanzeliswa koMoya kwiSfells
Iipilisi kunye noHyperensitivity
Umphili onokunyaniseka angasebenzisa olu buchule njengethuluzi lokuxilonga, kumnceda ukuba aqonde ngakumbi iimpawu kunye nentlungu yabathengi bakhe. Umphululi onobubele uqeqeshwe ukuqonda ukuba intlungu ayithathayo yesikhashana kwaye uya kukhulula ngokukhawuleza xa sele eqokele ulwazi oluncedo.
Indlela yokuba ngaphezulu kwe-Empathic
Yintoni i Tempo?
Indlela Yokufunda Ibhuku Yakho Yomdlalo
IziTyikitya ezisisiseko ngeeplati
Imfazwe yabemi baseSiriya ichazwe
Iilwimi zaseFransi eziphezulu
Iingcamango zeMatriki zeZibhalo zeMatriki zokuBonga